အင်္ဂလိပ်​စကားလုံး​တွေ​ပြော​နေ​လို့ နင်​ထူးခြား​လို့​ထင်​လား။ | White Boy Learning Burmese
October 3, 2014 by Win Hein	5 Comments
5 thoughts on “အင်္ဂလိပ်​စကားလုံး​တွေ​ပြော​နေ​လို့ နင်​ထူးခြား​လို့​ထင်​လား။”
Lwin Nyein Chan Kyaw
Terrain: ဒီစကားလုံးမှာ ဘာသာပြန်တာ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမ့ဲ လင်းသိုက်ညွှန့် terrainလို့ပြောတ့ဲအခါ သူက ဒီလိုသုံးတယ်: “လူငယ်တွေကို ဒီဗေလုပ်ဖြစ်ဖို့ ထိရိန်းပေးနေတာပါ”လို့ ပြောတယ်။ ဒီ အခြေအနေမှာတော့ terrainက အခြေခံနဲ့တူတယ်။ Terrain ရဲ့ သဒ္ဒါနက်ကျတော့ “မြေပြင်”ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမ့ဲ ဒီမှာ သုံးတာ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူး။ (I think, he is referring to “Train” = practice …not “Terrain”)
အဂၤလိပ္စကားလံုးေတြ ေျပာေနလို႕ နင္ ထူးျခားတယ္ လို႕ ထင္လား။
ဒါမွမဟုတ္ အဂၤလိပ္လုိ ညွပ္ေျပာေနလို႕ နင္ ထူးျခားေနၿပီလို႕ ထင္လား။
ႀကိယာ (verb) အေနနဲ႕ ဆိုရင္ အေရးမွာ သည္၊၏ အေျပာမွာ တယ္ သံုးရတာေလး က်န္ခဲ့တာေတြ႕လို႕ပါ …
ရတနာ @ helen
October 6, 2014 at 02:10
I mostly agree with what you pointed out. Since my friends told me all about him- how good ofawriter he is oraspeaker he is I kind of learned about him by watching his talks and reading his books but as you mentioned I also had to cut out watching and seeing! It’s simply because I don’t understand the language he uses- Burmese and English at the same time. (I don’t even know how to call it.)
Andafamous Burmese writer-Min Yu Wai(U Win Maung) once said that whatever language you’re using use only one. Or else you appear to be no good at the languages you’re trying to use in every single word you say.
Anyway let me talk about something that bugs mealot lately. Here’s an English word “teacher” that’s, as you know, ဆရာမ in Burmese. I don’t know if you noticed the youth here no longer use the Burmese word ဆရာမ anymore when you were in Yangon, unless you got to meet with the Burmese students. They call their teachers “teacher” and as time files “teacher” becomes “-cher” even. I mean we have the Burmese word for it. Why don’t they even bother to sayalovely, meaningful word ဆရာ or ဆရာမ?
And the phrase “I’m sorry”. I wouldn’t mind ifaBurmese said ‘I’m sorry” toaforeigner, whoever he is or wherever he’s from. However people say it onadaily basis even to Burmese people. Here again it has its own Burmese phrases such as တောင်းပန်ပါတယ် or ကန်တော့. They can use these to apologize for what they have misbehaved. But no, they do use only “Sorry”.
Well I was even thinking about it the other day that everyone became so internationalized that I was also going to use “Entschuldigung, Es tut mir leid” or “Pardon, Je suis désolée”. 😉 that’s an idea, huh?
Perhaps some (maybe most?) people consider that if they use English words in Burmese sentences people around them are impressed. Who knows?
January 5, 2015 at 14:45
သူငယ်ချင်းထောက်ပြထားတဲ့ အချက်လေးတွေက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်က အဲဒီလို မြန်မာတစ်ဝက် အင်္ဂလိပ်လို တစ်ဝက် ပြောနေမိတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းပညာပိုင်း စကားလုံးတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောရာက အကျင့်ပါနေပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာ အချင်းချင်းအတွက်ဆို အဲဒီလို ပြောရတာ ပိုကျစ်လစ်ပြီး ပိုမြင်သာတယ်လို့လဲ ထင်မိပါတယ်။ မြန်မာစကားကို မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂရုတစိုက် ပြောဆိုသင့်တယ်ဆိုတာကို သူငယ်ချင်းထောက်ပြလို့ ပိုပြီး လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားမိလာပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို သုံးသပ်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အားရင် ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ဘလောက်လေးလဲ လာဖတ်ပါဦး။ မြန်မာတစ်ဝက် အင်္ဂလိပ် တစ်ဝက် ဖြစ်နေတာကိုတော့ သီးခံပေးပါဗျ။ လိပ်စာက http://www.engineer4myanmar.com ပါ။